Réponses pour «natao»:
Total: 40 résultats - 0.091 secondes
TOMEFI COMM 02 DFB MENA mai2015 97%
Vokatry ny fihaonana voalohany natao tao amin’ny IEP Ampandrana ny 02 may 2015 araka ny fampiantsoana izay natao , dia toy izao no rafitra nifanarahana hitantanana izany hetsika izany :
Taratasy fampandraisana andraikitra 96%
Natao tao …………………………………………………………….
10 ANDRO 2018 94%
I reto tari-dalana ireto dia natao mba hanampiana anao amin’ny mahampitarika anao.
ZIONA VAOVAO TANTARA 94%
Tamin’ny Alahady 06 avrily 2014 teo no natao ny fanompoampivavahana fisantarana ny fankalazana an’Andriamanitra noho ny tsingerintaona faha 60 n’ny Antoko Mpihira ZIONA VAOVAO, 1954 – 2014.
FORMULAIRE TOSIKART 93%
Natao tao / Délivré à : ... Natao tao / Fait à :
lalampanorenana 2010 89%
Mitovy ny olona rehetra eo anatrehan'ny lalàna, na izy natao hiarovana, na izy natao handidy, na izy natao hamaizana.
Convocation 2016 87%
Natao teto ……………………...
Ary ny pejy vaovao tsy natao hanaovana dika mitovy na dika vilana ny pejy efa nihodina.
Bulletin Mensuel Tresor N37 78%
Mandringa anefa ny ezaka efa natao sy mbola hotanterahina raha tsy eo ny finiavan’ny rehetra handringana tanteraka ireo fomba fanao izay hita sy fantatra fa tsy nahomby hatramin’izay.
Fanentanana SAN ANTONIO-2015 76%
Ny “conférence générale” moa dia fotoan-dehibe ihany koa, natao hihaonan’ny Advantista maneran-tany.
Natao teto, Ny LEHIBE FOKONTANY
FIROTSAHANA HANARAKA OFANA TP2 AO VATOMANDRY 76%
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… Lahy Vavy Laharan’ny karapanondro (raha efa manana) ………………………………………natao tamin’ny ………………………… Laharan’ny finday:
AKON'NY DIOSEZY AMBOSITRA pdf 74%
Na ireo Relijiozy, na ireo « Institut Séculier » dia samy miara-monina anatina fianakaviana, anatina ankohonana misy azy, natao hiaina toy ny mpiray tampo, noho izany fehezin’ny lalànan’ny fifankatiavana, fifanajana, fifandeferana, fahamarinana.
TADY LAHARANA 187 73%
Tamin=iny volana iny mantsy, natao ny kaonty ka tsy ampy, Jiro,rano, hofan-trano,...
Article GBUT n°02 2014 73%
Fototry ny fifanekena, Antoky ny famonjena Io ilay tena fanilo Miaro anao amin’ny tsilo Mirehitra tsy mety maty Manazava izay rehetra ao anaty Izy no ilay voasoratra ho taratasy Voadika amin’ny teny gasy Miparitaka maneran-tany Mamaky azy na ny olona ambony na ny ambany Ilay teny lavorary tanteraka Mampahery izay rehetra reraka Manitsy izay hadalana Maneho ireo fahotana Teny manitsy izay diso Manoritra ny mety ho ampitso Saintsainina raha vao maraina, Mirakitra Ilay mofon’aina Ilay Teny tena atao hoe « vatsy », Hiainana, hanoherana ilay ratsy, Teny mandrindra, mandamina, Ny fiainan’ny kristianina Ilay teny natao hanitsiana Ilay teny natao hifaliana Ilay teny natao hohajaina Fa fototra sy loharanon’aina Io ilay Teny maharitra mandrakizay ‘Lay Teny nateraky ny Ray ‘Lay Teny mampianatra ny fahendrena ‘Lay Teny famonjena Notahina R.
Izahay mihevitra fa fitomboana ho antsika eo amin’ny fiainana sy fanatsarana ny fifandraisan’ny tsirairay amin’Andriamanitra ity asa soratra izay natao ho antsika GBUT ity.
fitantanambola FIFATO 71%
Noho izany dia izay operation natao rehetra dia soratana ny andro’iny ihany ao anaty boky fa tsy iandrasana fotoana hafa.
Boky torolalana momba ny fananan-tany 69%
Ity boky torolanana ity dia natao hanampiana ny vahoaka tsy ankanavaka amin’ny ireo antotan-taratasin-tany sy hiarovana arak’izay ny zon’ny amin’ny taniny amin’ireo fomba fikarakarana maro samihafa izay lazain’ny Didy aman-dalàna manankery.
Ho fampiharana ireo didy aman-dalàna mifehy ny fitateram-bahoaka sy ny fifamoivozana, ity bokin’andraikitra ity dia natao hamaritra ny fepetra fitateram-bahoaka an-dRenivohitra ho an’ny KAOPERATIVA …….…………… voafaritra ao amin’ny fahazoan-dalana hitrandraka mitondra ny laharana faha …………………….
Candidature BMOI Amiedesarts-VF-VM 67%
Ny	fampirantiana	dia	natao	hanamorana	ny	fahazoan’ny	be	sy	ny	maro	miditra	an-­‐tsehatra	eo	amin’ny	kolontsaina,	amin’ny	fahalalahan’ny	fandraisana	anjara	amin’ny	fifaninanana	sy	ny	fitsidihana	ny	toerana	ampirantiana	ary	ireo	loka	nomanina	ho	an’ny	mpanakanto	mendrika	indrindra.
Gazety fevrier 2019 66%
Ny fahasoavan’Andriamanitra dia natao ho an’ny olona rehetra Araka ny voalaza ery ambony dia ratsy fitondran-tena ny ankamaroan’ny mponina tao Kreta.
KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY version 2016 65%
Manana s’alat manokana ihany koa ireo alina ireo izay nezahana nohagasiana sy natao ao anatina tabilao mba ho mora vakiana izay natao any amin’ny faran’ity boky kely ity mitondra ny lohateny hoe IREO S’ALAT FANAO AMIN’NY ALIN’NY RAMADANY.
KORBATANE 6 NY VOLANA MASINA RAMADANY 64%
KORBATANE 5 version 2015 62%
Na izany na tsy izany dia efa mba natao ihany izay farahery tao anatin’ireo fotoana fohy nananana mba hahafantarantsika sy tsy hanadinoantsika ireo asa fanompoana tsy manampaharoa fanao anatin’ity volana masina Sha’abany ity amin’ity taona 2015 ity.